Roman Abramovich oo ku bixiyey £ 112.5M magdhow si uu u ceyriyo tababarayaasha Chelsea
Home Horyaalka Ingiriiska Roman Abramovich oo ku bixiyey £ 112.5M magdhow si uu u...
Mulkiilaha kooxda chelsea Ramon Abramovic ayaa lacago waali ah ku bixiya si loo buriyo Macalimiinta kooxdiisa maamusha oo aanan kooxda geynin halkii uu isaga u baahnaa kadib ceyrinrii Frank Lampard waxaa wargeysyada ka hadlaya ciyaaraha ay qorayaan sida uu u dhaqmo Ninka milkiyadiisa iska leh kooxda chelsea Abramovic.
Maadaama kooxdu heshiiska uu kula jiray dhicin oo waxaa ka harsanaa lixda bilood heshiiskiisii hore, Lampard wuxuu aruurinayaa magdhow dhan 2 milyan oo ginni halkii laga saadaalinaye 6 milyan oo ginni.
Kaliya Rafa Benitez iyo Guus Hiddink oo qandaraaskooda ka maqnaa oo aan wax qiimo ah ku fadhiyin Roman, ayaa ka raqiisan, halka bixitaankii Maurizio Sarri ee Juventus uu kooxda u keenay magdhow yar oo laga yaabo inuu jilciyey dharbaaxada ka bixitaankooda qaaliga ah Is gacan qabashada xigta ee ugu hooseysa ayaa la siiyay Avram Grant lacag gaareysay £ 5.2m.
Jose Mourinho iyo Antonio Conte ayaa la siiyey lacago kor u dhaafayey in ka badan £ 20m midkiiba, iyadoo jeegga shaqsiga ah ee 9 milyan ginni uu kor u qaaday rikoor hal-geesood ah oo ah 26.6 milyan oo ginni markii laga saaray shaqaalihiisii weynaa ee qolka jiifka iyo biilasha sharciga Jose guud ahaanba wuu ku gacan saydhay si kastaba ha noqotee 8.3 milyan.
Maaha in Chelsea ay kali ku tahay si kasta oo loo xisaabiyo xisaabtan culus. Inta badan naadiyada waaweyni waxay door muhiim ah ka qaateen boqolaalka iyo boqolaalka milyan ee lagu kharash gareeyay maamulayaasha aan loo baahnayn.
Sidoo kale taageerayaal badan oo Chelsea ah ayaa ka mudaaharaadaya waddooyinka iyagoo taageeraya Frank. Wax kasta oo ka badan ayaa ka cawday dhammaan waxyaabaha sida caadiga ah loogu isticmaalay dabka degdegga ah ee P45s halkii ay ka ahaan lahaayeen xitaa ciyaartoy aad u qiimeeya.
Waxay ogyihiin in sababta dhabta ah ee kooxdooda ay haatan ugu jirto kooxda ugu fiican kubada cagta ay tahay Abramovich, maahan maamulayaasha La’aanta milkiilahooda weyn ee Ruush iyo rabitaankooda maalgashiga Chelsea ayaa weli ku sii qulqulaya geeska sharafta ugu fiican Ladagaallanka dib u dhigga laga yaabee Jeeggiisa waa xaqiiqda.
Previous articleManchester United iyo Liverpool oo xiiseynaya Ibrahima Konate
Next articleRivaldo oo yiri Barcelona qalad weyn ayeey ku geleysaa hadii ay iibiyaan Messi.